Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. विश्वभर नै नयाँ–नयाँ भेरियन्टको प्रभाव देखिएको छ,यो चिन्ताजनक स्थिति हो : विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख (अन्तरवार्ता) – Janata Live
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डवले उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुको बिकल्प नभएको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसंगको अन्र्तरवार्तामा उहाँले विश्वभर नै महामारी निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको तथा मृत्युको संख्या पनि बढीरहेकाले उपचार भन्दा पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने तर्फ सबै सचेत इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्वपुर्ण तथा शक्तिशाली उपाय भएपनि खोपको तत्काल सुनिश्चिता र पहुँचमा नरहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
२ सय ७५ भन्दा बढी खोपहरु विकासको चरणमा रहेको र ९१ को चिकित्सकिय रुपमा प्रयोग भई नियामक निकायले कतिपयलाई आपतकालिन प्रयोगका लागि पनि अनुमति दिईसकेकाले केही आशाका किरण पनि देखा पर्न थालेको उल्लेख गर्र्नुभयो । उहाँले विश्व नै एकिकृत हुनसक्ने हो भने खोपको पर्याप्त उत्पादनमा अभूतपुर्व तिब्रता हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तर त्यसका लागि सबै सरकारहरुबाट तत्कालै महत्वपुर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । दक्षिण पुर्वी एशिया र विकासशिल राष्ट्रहरुमा खोपको वितरणमा अत्यासलाग्दो असन्तुलन बताउनुभयो ।
प्रस्तुत छ, विश्वभर कोभिड संक्रमण, रोकथाम तथा उपचारको वर्तमान अवस्था, खोपको पर्याप्तता ,नेपालमा संक्रमण वृद्धि को दर तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमका बारेमा नेपाल स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डवसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्र्तवार्ता ।
विश्वभरी नै कोभिड १९ महामारी निरन्तर रुपमा चर्कदो छ । अहिले संक्रमितहरुको संख्या बढीरहेको लगातार ९ हप्ता भयो र मृत्युको संख्या बढीरहेको लगातार ६ हप्ता । विश्वभर गत हप्ता पत्ता लागेका संक्रमणका घटनाहरु करिब करिब महामारीको पहिलो ५ महिनामा पत्ता लागेका घटनाहरुको बराबर थिए । गत हप्ता ५७ लाख संक्रमित पत्ता लागे भने ९३ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको जानकारी विश्वस्वास्थ्य संगठनलाई प्राप्त भएको छ । महामारीको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म संक्रमितहरुको संख्या १५ करोड नाघेको छ भने मृत्युको संख्या ३१ लाख ।
विश्वस्तरमा हेर्दा यो चिन्ताजनक स्थिति हो । अर्कोतर्फ विश्वभर नै नयाँ नया भेरियन्टको प्रभाव देखिएको छ । जुन तपाईले सुन्नुभएकै होला । बर्षभरीको लकडाउन र नियन्त्रणको अन्य उपायपछि धेरै मान्छे भेलाहुने ठाउँ खुल्न थाले भने खोपको वितरण पनि अप्रयाप्त रह्यो । त्यसैले उल्लेख्य प्रगती हुँदा हुदै पनि संसारभरी विशेषतः दक्षिण पुर्वी एशिया र विकासशिल राष्ट्रहरुमा खोपको वितरणमा अत्यासलाग्दो असन्तुलन छ ।
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । जुनजुन देशले यसलाई निन्त्रण गरे वा महामारी नियन्त्रणमा केही प्रगति गरे तिनीहरुमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको मेहनतपुर्वक कार्यान्वयन भएको छ । आधारभूत रुपमा भन्नुपर्दा, फराकिलो पहुँच सहितको परीक्षण, घटना अनुसन्धान र सम्पर्क पहिचान र मानिसहरु सबै जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायहरु अवलम्बन गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गरिएको थियो । राम्रो गर्ने देशहरुले बैज्ञानिक प्रमाण र सबल तथ्यांकका आधारमा नीति निर्माणहरु अपनाएका छन् । तर न्यून आय भएका देशहरु भन्दा उच्च आय भएका देशहरुको रोजाई अत्यन्तै फरक छ ।
बलियो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य स्याहार तथा जनस्वास्थ्यको क्षमता निर्माणमा लगानी गरेका देशहरु नै कोभिड १९का कारण उत्पन्न संकट चुलिँदा त्यसको सामना गर्न बढी सक्षम भए । अहिले देशहरुमा के बुझाई बढ्दो छ भने विगतको दशकमा स्वास्थ्य प्रणालीमा गरिएको अप्रयाप्त लगानीको प्रतिफल नै कोभिड १९ को संकटको रुपमा दुर्रभाग्यवस देखापरेको छ । तर यहाँ अवसरहरु पनि छन् । कोभिड १९ विरुद्ध लड्दै गर्दा अब हामीले बलियो स्वास्थ्य प्रणालीको निर्माण तथा जनस्वास्थ्य क्षमताको सवलिकरण बारे अत्यन्तै गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । ताकि आगामी बर्षमा यस्ता महामारीहरुको प्रभावकारी समाधान गर्न सकियोस् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन आधारभूत रुपमा एउटा प्राविधिक निकाय हो । हामी नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड १९ संग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र तथा विषयमा विश्वव्यापी प्रमाण तथा सुझाव उपलब्ध गराउँछौ । हामीले दिएको जानकारीलाई के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने हो । यद्यपि हामी सरकारले लागु गर्न सकोस् भनेर सुझावलाई नेपालका लागि सुहाउँदो बनाउने प्रयास गर्छौ । कोभिड १९ महामारीको सुरुवात देखि नै हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव, मानवीय स्रोत र सामाग्रीको सहयोग दिदै आएका छौ । हाम्रो निकट सम्बन्धका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्छौ । र प्राविधिक ज्ञान तथा सुझाव निरन्तर आदानप्रदान गर्छौ । चाहे ती सरकारी निजी वा गैर सरकारी किन नहुन् । देशका सबै संस्थाहरुले कोभिड १९ विरुद्ध लड्नका लागि समग्र समाजको दृष्टिकोणबाट आफ्ना स्रोत साधनलाई एकिकृत गरि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै कोभिड १९ विरुद्धको लडाईमा ऐक्यवद्ध हुने र बैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णय लिने कुराको आशा गर्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका सुझावहरु सरकारका निर्देशिका, मार्गदर्शन, मापदण्ड तथा कार्यविधिका रुपमा परिणत भएका छन् । हामीले कोभिड १९ विरुद्धको लडाईमा प्राप्त अध्यावधिक सूचना तथा वैज्ञानिक प्रमाणहरु सदैव सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौ । किनकि रोग बढ्दै जाँदा नया भेरियन्टहरु आईरहेका छन् । अनि नयाँ प्रमाणहरु पनि । हामी तत्कालै तीनलाई सम्प्रेषण गर्छौ र सरोकारवालाहरुलाई यस विषयमा छलफल र निर्णय अगाडि बढाउनका लागि मनाउन हम्रो शक्ति , विश्वसनियता र भूमिकालाई प्रयोग गर्छौ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीहरु संघीय वा केन्द्रीय तहमा मात्रै नभएर प्रादेशिक तहमा पनि राखिएका छन् । जसले यस कठिन समयमा महत्वपुर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँछन् । मुलतः विगत एक बर्षदेखि नेपालमा हामीले समग्र व्यवहारीक दृष्टिकोण अपनाएका छौ ।
हामीसंग जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । जस्तै घटना अनुसन्धान, सम्पर्क पहिचान, जोखिममा रहेकाहरुको क्वारेन्टीन तथा संक्रमित तथा विरामीहरुको आईसोलेसन । संक्रमणको विस्तार रोक्न वा कम गर्न मास्क लगाउने, हातको सफाई गर्ने तथा भौतिक दुरी कायम गर्ने उपाय पनि छन् । उपचारका लागि अक्सिजन र डेक्सामेथाजोन पनि छन् । कोभिड १९ को रोकथामका लागि विभिन्न सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोपहरु पनि छन् । अब हामीले गर्नुपर्ने जरुरी काम भनेको यीनमा पहुँच विस्तार गर्नु , संक्रमण रोक्नु र जीवन बचाउनु हो । नेपालले कोभिड १९ विरुद्ध यी विभिन्न रणनीतिहरु अपनाएको छ ।
उपलब्ध साधनको निरन्तर र समतापुर्ण प्रयोग भएमा केही महिनामा नै यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न साधनहरु हामी संग छन् । खोप एक महत्वपुर्ण तथा शक्तिशाली उपाय हो । तर एउटामात्र उपाय होइन । भौतिक दुरी, मास्क, हातको सफाई, हावा संञ्चार अर्थात् भेन्टीलेसन,निगरानी, परीक्षण, सम्पर्क पहिचान, आइसोलेसन, क्वारेन्टीन र स्नेहपुर्ण स्याहार सुसार । यी सबैले संक्रमण रोकन र जीवन बचाउन सहयोग गर्छन् । हामीले विर्सनुहुन्न कि सही नीति हुनु भनेको समाधानको एउटा पक्ष मात्रै हो । अर्को पक्ष चाही यसको पुर्ण कार्यान्वयन हो ।
महामारीको रोकथाम सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले भाईरस संक्रमणको श्रृंखला तोड्नु पर्छ । त्यसका लागि हामीले जनस्वास्थ्य व्यवहारका नयाँ मुल्य मान्यताको पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले अगाडिको बाटो सहज त छैन किन कि हामी विश्वव्यापी आपुर्ति श्रृंखला अन्र्तगत नै काम गर्दैछौ । जहाँ धेरै प्रकारका निर्भरताहरु छन् । तर संक्रमण दर डरलाग्दो हुँदा हुदै पनि हामीले निको हुने दर पनि बिर्सनु हुदैन । जसले हामीलाई आशा दिन्छ । हाल नेपालमा करिब ८३ प्रतिशत मानिस निको भएका छन् ।
हालसालै संक्रमितको संख्यामा तिब्र वृद्धि हुँदा निको हुने दर घटेको अनि संक्रिय संक्रमितको संख्या बढेको देखिन्छ तर पनि आशावादी हुने कारण के छ भने २ सय ७५ भन्दा बढी खोपहरु विकास हुदैछन् । जसमध्ये ९१ को चिकित्सकिय परिचालन सुरु भईसक्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन अनि सदस्य राष्ट्रका कडा नियामक निकायहरुले ती मध्ये कतिलाई आपतकालिन प्रयोगका लागि बाटो खोलिदिईसके । विकास प्रक्रियाको चरणमा रहेका यी खोपहरुले विभिन्न प्रकारका खोपका विधि र प्रविधि अपनाएका छन् । यी मध्ये केही निष्कृय बनाईएका पुर्ण भाइरस, इनएक्टीभिटेट होल भाईरस र भाईरल भिक्टर जस्ता पुराना अनि एमआरएनए र डिएनए जस्ता पहिलोचोटी प्रयोग भएका नयाँ प्रविधि छन् । यीनले धेरै किसिमका सुरक्षित तथा प्रभावकारी खोप पाउने हाम्रो संभावनालाई बढाएका छन् ।
प्र अहिले खोपको अवस्था कस्तो छ ? नेपाल जस्ता देशले सहज रुपमा खोप पाउन किन सकिरहेका छैनन् ?
नेपाल जस्तो देशहरुमा खोपको सुनिश्चितताका लागि पनि यो आवश्यक छ । तर हामीले सम्झनुपर्छ कि सुरक्षित र प्रभावकारी खोपले मात्रै समस्या हल हुदैन । आरटिपिसिआर र एन्टिजिन परीक्षण तथा तिब्र निदानका उपाय र जीवनदायी औषधी उपचारका उपाय पनि महामारी अन्त्य र विश्वभरका स्वास्थ्य लाभका लागि अत्यावश्यक छन् । यी जीवनदायी साधनहरु तब मात्र प्रभावकारी हुन्छन् जब सबै भन्दा जोखिममा रहेका अधिकांशका लागि समतापुर्ण ढंगले सबै देश एकैपटक यी उपलब्ध हुन्छन् । यसका लागि सवल स्वास्थ्य प्रणाली तथा सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ । हालै देखिएका भेरियन्टहरु चिन्ताका विषय हुन् र तीनले सामुहिक कदमको महत्व दर्शाउँछन् । किन कि भाईरसलाई फैलिन दिंदा वा संक्रमणको श्रृंखला तोड्न नसक्दा नै म्युटेसन हुन्छ र भेरियन्ट उत्पत्ति हुन्छन् ।
त्यसैले विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपाय लागु गर्दै खोप उत्पादन र वितरणमा सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउँदै भाइरसलाई परास्त गर्नु महत्वपुर्ण छ । विश्वस्वास्थ्य संगठनले सक्रियतापुर्वक भनिरहेको छ कि हामीसंग अझै धेरै खोप उत्पादक हुनुपर्छ । तीनमा बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनीहरुलाई पनि खोप उत्पादनको अनुमति दिनुपर्छ ताकी ठूलो परिमाणमा खोप उत्पादन होस् । तपाईलाई थाहा छ कि निगरानी ,यो कस्तो भाइरस हो रुआदी विषयमा उपलब्ध भए अनुसारका आनुवांशिक जेनेटिक सूचनाको आदान प्रधान, जिन सिक्वन्सीङ क्षमता नभएका देशहरुको क्षमता विकास, खोप विकास गर्ने देशहरु बीचको सहकार्य , अनुसन्धान, खोप उत्पादन अनि सबैको तीनमा पहुँच । भाइरसलाई परास्त गर्न यी सबै कुरा जरुरी छ । यसमा धेरै तत्व संलग्न छन् र सबैको बलियो सहकार्य चाहिन्छ ।
यस कोभिड १९ महामारीका लागि संसारका कुनै पनि देश पर्याप्त मात्रामा तयार थिएन । यसको लागि तपाईले अहिले सिंगो संसारको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा पनि अल्पविकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएका गरिब राष्ट्र««हरुमा यसको असर बढी रह्यो । हुन त कोभिड १९ बारे विज्ञानको विकाश नि निरन्तर जारी छ । विगत १ बर्षमा क्षमता विकास र तयारीका लागि धेरै काम भएका छन् । तर दशकौ सम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न हामीले गुमाएको अवसरको क्षतिपूर्ति यो छोटो समयमा नै हुन्छ भन्ने आशा गर्नु कठिन छ । अहिले धेरै भन्दा धेरै मानिसले महसुस गरेका छन् र मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको सुनेको छु कि, जीवन नै पहिलो प्राथमिकता हो । स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो ।